SANJAY GURUNG: प्रचण्ड र महेन्द्र बराबरी नै छन ।
महेन्द्रको पनि त्यही हो, प्रचण्डको पनि त्यही हो।'
अन्तरिम संवधानमै नयाँ संविधानका आधारभूत सिद्धान्त समेटिएको बताउँदै उनले भने, ' अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाले 'आधारभूत सिद्धान्त' लेखिसकेको छ। त्यसलाई पेलपाल गरेर अन्यत्र लैजान खोजिएको छ। त्यो अनुसारको संविधान बनेपछि सकिन्छ।'
माओवादीले नयाँ राजनीतिक मूलधार भन्ने शब्द थपेर पेल्न खोजेको बताउँदै उनले प्रश्न गरे, 'के हो यो राजनीतिक मूलधार भनेको? संसारभर चलेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता मान्ने कि नमान्ने? त्यसैमा छ सबभन्दा गाँठो।'
'कम्युनिष्ट संविधान बनाउने हो भने त्यही अनुसार खुलेर आउन माओवादीलाई चुनौती दिए।
'मोडालिटीको बारेमा केही कुरामा 'कम्प्रोमाइज' हुनसक्छ, मोडल अफ डेमोक्रेसीमा छलफल हुनसक्छ', नेपाली काँग्रेसले अपनाउनसक्ने लचकताबारे पौडेलले भने, 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त हामीले भनेका छौं। कस्तो व्यवस्था गर्दा यो संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई कुरालाई सुनिश्चित गर्छ, त्यसमा छलफल गर्न तयार छौं।'
राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध भने पनि अन्तर संसदीय यूनियनमा जानै परेको उनले स्मरण गर्दै भने, 'चीनले पनि भाग लिइराखेको छ।'
नेपालमा अपनाएको संसदीय प्रणाली बेलायती मोडलको नरहेको बताउँदै भने, 'मिश्रित चुनाव प्रणाली स्वीकार गर्नेबित्तिकै त्यसमा मौलिक अन्तर आइसक्यो। समिति प्रणालीमा मौलिक अन्तर आइसक्यो। त्यो वेष्टमिनिष्टर सिस्टम भन्दा भिन्न भैसकेको छ।'